Boosaaso oo lagu qabtay Nin 25 sano dadka sixrayey[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Boosaaso oo lagu qabtay Nin 25 sano dadka sixrayey[Sawirro]
Sixiroole Maxamed Cismaan Yuusuf
BOOSAASO – Ciidamada amniga Boosaaso ayaa gacanta ku qabtay laba nin oo mid kamid ah uu 25 sano ka badan ku shaqeysanayey howlaha sixirka kaasoo yimid Boosaaso sanadkii 1992-dii.
Taliska Ciidamada Booliska ayaa soo bandhigay ninkan iyo alaabta uu sixirka u adeegsado kuwaasoo ka kooban lafo ari,loox lagu dhajiyey masaamiir,caws,balk xayawaanka ee loo yaqaan caana-qubta,salool,buskud,digir, iyo waxyaabo kale.
Lafaha ariga ayaa qaarkood ahaayeen kuwa la shiilay,halka looxa masaamiirta lagu dhajiyey si dherer ah oo si simon la isugu dhajiyey.
Taliyaha saldhiga bartamaha Boosaaso Gaashaanle dhexe Yuusuf Axmed ayaa sheegay in ragan ay soo qabteen ciidanka Booliska Boosaaso xiligana ay baaris ku socoto lana horgeyn doono Maxkamadda.
Nimankaan waxaa soo qabtay ciidanka Booliska qaybta gobolka Bari saldhiga ayay keeneen, waa niman Saaxiriin ah oo dadka Sixri jiray, maadama ay Saaxiriin yihiin baaris ayaa ku socota, waxa uu wato Gurigiisa ayaa laga soo qaaday’..” ayuu yiri y
Sheekh Cabdul Xaq oo ka mid ah Culumada dadka ku daweeya Qur’aanka, ayaa labada Saaxir kula kulmay Saldhiga bartamaha Boosaaso, waxaana hogaanka Saaxiriinta uu balan qaaday in uusan howshan dib ugu noqonayn.
Sheekhu waa noo yimi wuuna Waraystay, markii uu soo galay ayuu gariiray ninku, wuu u waramay, wuxuu Shiikha u balan qaaday inuusan u noqonayn hawshan, Sharciga ayaan horgeynaynaa ninkaan’’ ayuu yiri Taliyuhu
Waxa uu sheegay in ay jiraan dad badan oo xanuunsan kuwaasoo yimid saldhiga markii ay maqleen in la halo ragan saaxiriinta ah,isagoona hadalkiisa ku daray in Ololahan lagu qabqabanayo saaxiriinta uu yahay mid below ah.
Maxamed Cismaan Yuusuf oo da’diisu lagu sheegay kontan sano jir ayaa sheegay in shaqadan uu hayey muddo 25 sano ah uuna soo dejinayey rooxaan iyo mingis ,isagoona qiray in uu adeegsanayey lafo ari,caws iyo alaabo kale oo qashin u badnaa oo lagu qabtay.
Muddo 25-sano ah ayaan joogay Boosaaso oo aan garaacayay Mingiska iyo Rooxaanta, anniga oo jiifa oo Qaad cunaya ayaa la iso xiray, waxaa la igu soo qabtay Lafo iyo Caws waa wixii aan Rooxaanta ku garaacayay’’ ayuu yiri.
Isagoo hadalkiisa sii-wata ayuu sheegay” ’Lafaha Rooxaanta ayaan kuso dejinaa, waana sharaxnaa Lafaha ka dibna waxaan saarnaa cawska, dadka lacago ayaan ka qaadanaa, kuwo Konton Doolar ayaan ka qaadi jiray, halka kuwo kalena aan lacago kale ka qaadan jirnay’’.
Odaygan ayaa sheegay in dadka ugu badan ee u iman jiray ay ka caban jireen murqaha iyo xannuuno kale balse uusan qiyaasi karin dadkaas oo aad u badnaa.
Mar uu ka hadlaayey waxa ay yiraahdaan marka ay akhrinayaan quraafaadka ay shaydaanada ugu yeeraan ayuu ku jawaabay”..Rooxaanta waan tunaa, waxaan niraahnaa Sheekh Cabdul Qaadir Cudurkiina aragnaye, caafimaadkiina hala arko, haddii aysan caafimaad keenin waxaan niraahnaa iska taga, Cabdul Qaadir Jaylaani aaway ciidankaagii ayaan niraahnaa’’.